Laba qodob oo xasaasi ah oo maanta hor yaalla Aqalka Hoose & Xildhibaanno xumaan u bareeray | Hadalsame Media
Home Wararka Laba qodob oo xasaasi ah oo maanta hor yaalla Aqalka Hoose &...
Laba qodob oo xasaasi ah oo maanta hor yaalla Aqalka Hoose & Xildhibaanno xumaan u bareeray
(Muqdisho) 27 Juun 2020 – Waxaa maanta loo madlan yahay laba qodob oo xasaasi ah oo uu mid yahay metelaadda Gobolka Banaadir iyo midka kale oo ah Guddiga Doorashada Qaranka ee 2021-ka, waloow la sheegayo inuu kooramku buuxsami la’yahay oo ay qaar dibedda dhooban yihiin, qaarna aanay weli soo xaadirinba.
Waxaa muddo bannaanka Villa Hargaysa dhoobnaa Xildhibaannada Aqalka Hoose oo qaab beelaysan ay qaarkood u abaarayaan arrinta metelaadda Gobolka Banaadir, ha ahaadeen kuwo gobolka is xijinaya ama kuwo ximinaya, taasoo ah laba arrimood oo ay waxgaradku la yaabeen kuna tilmaameen mid nasiib darro ah oo aan ku fiicnayn dal kasoo kabanaya dagaallo sokeeye.
Waxaa kal-fadhigii hore ay kaamarooyinku qabanayeen Xildhibaannada oo si cad qabiillo ugu kala safan oo sidii fadhi ku dirirkii u tannaagoonaya, isu hanjabaya amaba qabiillo maagaya kuwana difaacaya.
Waxaa la sheegay in si kastaba la guda geli doono qodobkaasi oo horay dib loogu dhigay, isla markaana cod loo qaadi doono.
Qodobka 2-aad Guddoonkaa Guddiga Madaxa BanNaan ee Doorashooyinka, Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey), ayaa durba soo gaartey Baarlamanka, iyada oo ka hadli doonta qadiyadda la xiriirta Doorashada 2020/2021-ka oo aad loogu muransan yahay.
Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqi doonto xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada, ama inay cudur daarato, maadaama aysan weli dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aysanisaga imaan arrimaha doorashooyinka dalka.
Guddoonka Guddiga Doorashooyinka ayaa faahfaahin doonta sida ay u dhacayso Doorashada 2021, iyada oo ama sheegi doonta xilliga la qabanayo ama ku madli karta Kulanka DF iyo Maamullada oo mar aan fogayn qabsoomaya.
Previous articleDHEGEYSO: Dowladda Sweden oo lacag MUSHAHAR u dhiganta u qortay ”Dadka Halista ku Jira” (Risk Group) & dhib oo jira
Next articleRajadii laga qabey inuu furmo kulanka Baarlamanka oo sii yaraanaysa (Sababta?)